पद छाड्दा झन् लोकप्रिय बने श्रेष्ठ | We Nepali
पद छाड्दा झन् लोकप्रिय बने श्रेष्ठ
वीनेपाली | २०७४ असोज ११ गते २२:२३
लण्डन । एनआरएनए यूकेका निवर्तमान कोषाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले गत साता औपचारिक रुपमा आफ्नो कांधबाट जिम्मेवारीको गरुंगो भारी बिसाए । त्यति ठूलो संस्थाको कोषको जिम्मेवारी चानचुने थिएन । तर, उनको कार्यशैलीको सर्वत्र प्रशंसा भयो । यतिसम्मकी एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष डा. शेष घलेले यूके एनसीसीको खुलेर प्रशंसा गरे । घलेले आर्थिक पारदर्शीतामा यूके समिति सबैभन्दा उदाहरणीय भएको बताएपछि श्रेष्ठलाई आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमुलक रहेको अनुभूति भएको छ । ‘संस्थाको हरहिसाव चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी होस् भनेर म सधैं सचेत रहें’, श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कार्यसमितिका साथीहरुसंग म कठोर बनेको भए क्षमा चाहन्छु । वास्तवमा म संस्थाकै हित र प्रतिष्ठाका लागि चिन्तित थिएं ।’
गत आइतबार अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा भएको बुझबुझारथ कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङ र कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रिय अध्यक्ष डा. घलेलाई ३९ हजार १८ पाउण्ड ९७ पेन्स (करिब ५२ लाख रुपैयां) को चेक हस्तान्तरण गरेपछि घले कम्ती खुशी भएनन् । ‘यति ठूलो रकमको चेक पाउंदा म धेरै आभारी छु’, घलेले भने, ‘म अगाडि भएर भनेको होइन, दुई वर्षको कार्यकालमा बेलायत एनसीसीले सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेर देखाएको छ । विश्वका अरु शाखाले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’ बाढी पीडितलाई होस् वा एनआरएनए भवन निर्माणमा सहयोग पठाउन । एनआरएनए यूके नै पहिलो र ‘सिस्टमेटिक’ रहेको भन्दै घलेले यूके शाखाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
एनआरएनए यूकेका हरेक सदस्यको सदस्यता शुल्कबापत आइसिसीलाई बुझाउनुपर्ने ५ डलर र काठमाण्डौमा निर्माणाधिन एनआरएनए भवनका लागि हरेक सदस्यबाट उठाइएको १० डलर गरि संकलित रकम घलेलाई बुझाइएको हो ।
एनआरएनए यूकेको निवर्तमान कार्यसमितिले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई १ लाख ३६ हजार पाउण्डसहितको बैंक खाता हस्तान्तरण गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइसीसीलाई बुझाइएको रकम, नेपाल हाउसका लागि संकलित रकम र सबै खर्च कटाउंदा समेत एनआरएनए यूकेको खातामा करिब ३८ हजार पाउण्ड वचत रहेको श्रेष्ठले बताए । दुई वर्षअघि कार्यभार सम्हाल्दा करिब ११ हजार पाउण्डसहितको बैंक खाता बुझेकामा छोड्ने बेला ३८ हजार पाउण्ड बनाएर हस्तान्तरण गर्न पाउंदा आफूलाई गौरव लागेको पनि श्रेष्ठले सुनाए ।
निवर्तमान कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले दुई वर्षको अवधिमा कोष संकलनका लागि झण्डै डेढ दर्जन कार्यक्रम गरिएको पनि उल्लेख गरे ।